काठमाडाैँ । भगवान् विष्णुले दोस्रो कुर्म अर्थात् कछुवा अवतार लिएर देव एवं मानव कल्याणका लागि काम गरेको दिनको स्मरणमा आज कुर्म जयन्ती मनाइँदै छ । समुद्र मन्थनको बेला देवता र
काठमाडाैँ । वैदिक सनातन हिन्दू धर्मअनुसार आज नृसिंह जयन्ती मनाइँदै छ । नृसिंह अवतार भगवान् विष्णुको चाैथो अवतार हो । दैत्यराज हिरण्यकश्यपुको ‘बध’ गरी भक्त प्रह्लादको उद्धार गर्नका निमित्त विष्णु
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल नवमीका दिन मनाइने राष्ट्रिय विभूति सीता उत्पत्ति दिवस आज सीताप्रति श्रद्धा÷भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइँदै छ । त्रेता युगमा मिथिलाका राजा जनकले ठूलो यज्ञ
काठमाडाैँ । वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन जन्मनुभएका परशुराम ऋषिको जन्मजयन्ती पनि आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । अष्टचिरञ्जीवीमध्येका एक परशुराम तृतीयाका दिन बेलुकी जन्मिएको विभिन्न पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख
काठमाडाैं । अरबी पात्रो हिजरी संवत्अनुसार दशौँ महिना (सौवाल) को पहिलो दिन आज देशभरका मुस्लिम समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी ठूलाबडाबाट आशीर्वाद लिएर ईदउल फित्र पर्व मनाउँदै छन् । दशौँ महिनाको
काठमाडौं । इद (इद उल फित्र) पर्वको अवसरमा सरकारले भोलि मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै इद पर्वका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। ०७८ फागुन २६
काठमाडौँ । राजा मानदेवले चलाई हालसम्म निरन्तर चलेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक कान्तिभैरव जात्रा शुक्रबार मध्यरातदेखि गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा सुरु भएको छ । वैशाख कृष्ण चतुर्दशीका दिन स्थानीयवासीले आ–आफ्ना घर आँगनमा सरसफाइ
भक्तपुर । साँझ ढल्किँदै गयो । मानिसहरूको चहलपहल बढ्दै गयो । आँगनमा बाजा बज्दै थियो । बाजाको आवाज सुनेर रातको पर्वाह नगरी वारिदेखि पारि गाउँसम्मका महिला, पुरुष, बालबालिकाको भिड बढ्दै
हाँडीगाउँकाे जात्रा : टुँडालदेवीको हराएको गहना यसरी खोजियो (तस्वीरमा)
काठमाडौँ । काठमाडाैँ महानगरपालिका वडा नं ५ स्थित गहनापोखरीमा टुँडालदेवीको हराएको गहना खोजिएको छ । टुँडालदेवीको हराएको गहना खोज्न प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशीदेखि सुरु हुन्छ । जात्राको विभिन्न प्रक्रिया
डडेल्धुराकाे प्रसिद्ध घटाल जात्रा आज
डडेल्धुरा । यहाँको प्रसिद्ध घटाल देवताको जात्रा (मेला) आज मनाइने भएको छ । अमरगढी नगरपालिका–३ मा पर्ने सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध देवता घटालको जात्रा दुई वर्षपछि यस वर्ष मनाइँदै गरेको घटाल देवताका
सपनतीर्थ मेलामा स्नान र पूजा गर्नेको घुँइचो (फोटोफिचर)
महेश्वर के.सी. काठमाडौँ । काठमाडौँको टोखास्थित सपनतीर्थमा हरेक नयाँ वर्षको पहिलो दिन लाग्ने सपनतीर्थ मेलामा यसपटक पनि श्रद्धालुको घुँइचो लागेको छ । आज वैशाख १ गते बिहानैदेखि श्रद्धालुहरुको घुँइचो लागेको
काठमाडाैँ । धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व बोकेको वालुवाटारस्थित टुँडालदेवी मन्दिर परिसरमा बैष्णवी टुँडालदेवी माताको जात्रा लाग्ने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–४ वालुवाटारस्थित लिच्छविकालीन मन्दिर टुँडालदेवीमा चैत शुक्ल पूर्णिमाका दिन
एमाले अध्यक्ष ओलीले चढाए हलेसीमा ४ लाख भेटी
खाेटाङ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी मन्दिरलाई रु दुई लाख र हलेसी मारतिका गुम्बालाई रु दुई लाख भेटी पठाउनुएको छ । गत चैत
तनहुँमा २५ वडाको नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कुन पार्टीले जिते ?
स्याङ्जाको कालीगण्डकीमा एमाले विजयी